Chelsea Oo Ugu Danbeyn Soo Gabagabeysay Saxiixa Ciyaaryahan Romelu Lukaku | WWW.DARARWEYNE.TK
Chelsea Oo Ugu Danbeyn Soo Gabagabeysay Saxiixa Ciyaaryahan Romelu Lukaku
Kooxda Chelsea ayaa dhameystirtay saxiixa weeraryahanka dalka Belgium Romelu Lukaku kaasoo 18 milyan oo ginni si rasmi ah kaga soo wareegay kooxda Anderlecht.
18 jirkaan ayaa ugu danbeyn heshiiskiisa uu dhaqan galay ka dib 10 maalmood markii uu tijaabada caafimaadka ku maray London, waxaana diyaar uu u ahaan doonaa in loo xusho kulanka West Brom ay sabtida ku soo booqaneyso Stamford Bridge.
Lukaku ayaa gool dhalinta horyaalka Belgium soo qaaday xilli ciyaareedkii 2009-10, waxaana uu xilli ciyaareedkii hore dhaliyay 16 gool, isagoo ka mid ah laacibiinta da’da yar ee qaarada yurub.
“Waa riyo run noqotay. Waxaan ku riyoon jiray inaan halkaan ka ciyaaro tan iyo markii aan ahaa 10 jir, waxaana ka fekeri jiray anigoo gacan qaadaya ciyaartoyda sida John Terry, Frank Lampard iyo Didier Drogba, waana wax cajiib ah inaan imaado koox weyn oo hami leh” ayuu Lukaku ku sheegay wareysi uu siiyay website-ka Chelsea.
Lukaku oo xoog ahaan iyo dherer ahaan ka dhisan ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay Drogba-ha cusub, waxaana uu sheegay inuu doonayo inuu wax badan ka barto laacibka reer Ivory Coast.
“Qaab ciyaareed isku mid ah ayaan leenahay, lakiin sidoo kale waan orod badanahay” ayuu yiri.
“Waxaan rabaa inaan ka barto sida halkaan looga ciyaaro iyo sida ciyaaraha la isagu diyaariyo”
“Waxaan kaloo wax ka baran karaa weeraryahanada kale iyo ciyaartoyda qibrada leh ee kooxda ku jira”
Lukaku ayaa tan iyo intii uu tijaabada caafimaadka maray waxa uu tababar la qaadanayay Chelsea, lakiin waxaa heshiiskiisa ka dhinaa saxiixa warqadaha iyo in si rasmi ah loo diwaangeliyo, tii oo ay haatan soo gabagabeeyeen Chelsea.
Weeraryahanka 18 jirka ah waxa uu Chelsea u xiran doonaa numberka 18aad
« Kabtanka Man Utd Nemanja Vidic Oo Dhaawac Dartiis Garoomada Uga Maqnaandoona 5 Isbuuc
Kulamo waaweyn oo xiiso leh oo kadhici doona premier league »